स्वयम्सेवक अवसरहरू - लन्केस्टर स्वास्थ्य केन्द्र स्वयम्सेवक अवसरहरू - लन्केस्टर स्वास्थ्य केन्द्र
के तपाईं पछाडि खडा हुनुहुन्छ? स्वस्थ समुदाय?
यदि तपाईं स्वास्थ्य सेवा मार्फत इक्विटीमा विश्वास गर्नुहुन्छ जुन हाम्रो सम्पूर्ण समुदायलाई स्वागत गर्दछ, सुदृढ पार्छ, र मद्दत गर्दछ भने, तपाईं सही ठाउँमा हुनुहुन्छ! हामीसँग क्लिनिकलदेखि प्रशासनिक सम्म तपाईंको समय र प्रतिभा दिन तपाईंको लागि धेरै स्वयंसेवी अवसरहरू उपलब्ध छन्। कृपया एक स्वयम्सेवा आवेदन भर्नुहोस्
एक पटक पूर्ण भएपछि, कृपया तपाईंको अनुप्रयोग फर्वार्ड गर्नुहोस् र पुन: सुरू गर्नुहोस् (यदि लागू भएमा) लाई कनेक्ट@lanchc.org.
के तपाईका व्यक्तिगत मानहरू हाम्रो मिशन, दर्शन, र हेरचाहको मोडेलसँग पign्क्तिबद्ध छन्? हाम्रो टीममा सम्मिलित हुनुहोस्!